सानिमा इक्विटी फन्डको ३३ प्रतिशत लाभांश नेप्सेमा समाहित, अब कति पुग्ला मूल्य ? | Ratopati
सानिमा इक्विटी फन्डको ३३ प्रतिशत लाभांश नेप्सेमा समाहित, अब कति पुग्ला मूल्य ?
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeअसोज १, २०७८ chat_bubble_outline0
सानिमा इक्विटी फन्डको ३३% नगद लाभांशको मूल्य नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा समायोजन भएको छ । कम्पनीले हालैमात्र आफ्ना इक्विटी फन्डका लाभग्राहीहरुलाई घोषणा गरेको नगद लाभांशको मूल्य नेप्सेमा समाहित भएको हो ।
मूल्य समायोजनपछि नेप्सेमा यस फन्डको भाउ प्रतिइकाई १२ रुपैयाँ ८५ पैसा कायम भएको छ । अब आइतबार यस फन्डको कारोबार समायोजित मूल्यलाई आधार मानेर खुल्नेछ । फन्डको बिहीबारको मूल्य १६ रुपैयाँ १५ पैसामा समायोजन भएको हो ।
सानिमाले नगद लाभांश वितरणका लागि आजै शुक्रबार (असोज १ गते) बुक क्लोज गरेको छ । भदौ ३१ गतेसम्म कायम सेयरधनीले फन्डले वितरण गर्ने नगद लाभांश हात पार्न सक्नेछन् ।
नेप्सेमा ४० अङ्कको पहिरो
आईपीओ निष्काशन गर्दै लोअर इर्खुवा हाइड्रोपावर, निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल नियुक्त
हाइड्रोमा पुनः छलाङ, नेप्से परिसूचक ७१ अङ्कले बढ्यो
सेयर बजार ‘बाउन्स ब्याक’, ५० अंकले बढेको नेप्सेमा ५ अर्बको कारोबार
ग्लोबल आईएमई बैंकले लगानीकर्तालाई १३.५० प्रतिशत लाभांश बाँड्ने
सेयर बजार राताम्मे, नेप्से एकैदिन ७६.६५ अंकले घट्यो
पीडित किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन प्रचण्डको आग्रह
कृषकलाई क्षतिपूर्ति दिन एकीकृत समाजवादीको माग
सिरियाको राजधानीमा सैनिक बसमाथि हमला, थुप्रै सैनिक मारिए
दुवईमा दीपिकाको मस्ती
सिद्धार्थ बैंकको मुद्दती खाता अनलाइनबाटै खोल्न सकिने
अनलाइन सपिङ आलिया बजार सञ्चालनमा
बेमौसमी वर्षाका कारण कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरिँदै
महतद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण